नेपालगञ्ज म्याराथनको उपधि एपिएफका पार्की र भण्डारीलाई – Sadarline
2021 May 12, Wednesday ।। २९ बैशाख २०७८, बुधबार
प्रदेश युवा सम्मेलन बुधवारदेखि धनगढीमा शुरु
२७ जेठ २०७५ आइतवारको राशिफल
बिग्रुपद्वारा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
बिन्दुलाई भोटिङ्ग गरी ईन्टीग्रेटीआईडल नेपाल–२०७३ बनाउन अपिल
कुलचन्द्र गौतम स्मृति संस्थाद्वारा त्रिविमा संस्कृत अनुसन्धानमा सहयोग
बिनादर्ता इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाए कारबाही
नेपालगञ्ज म्याराथनको उपधि एपिएफका पार्की र भण्डारीलाई
रुद्र सुवेदी ६ मंसिर २०७७, शनिबार १४:३९
नेपालगञ्ज : नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको ‘छैठौं नेपालगञ्ज म्याराथन’ मा सशस्त्र प्रहरीको विभागिय टिमले कब्जा जमाएको छ । शनिबार सम्पन्न भएको म्याराथन (पुरुष) तर्फ एपिएफका गोपीचन्द्र पार्की र हाफ म्याराथन (महिला) तर्फ एपिएफ कै पुष्पा भण्डारीले बाजी मारेका हुन ।
पूरा म्याराथन तर्फ सशस्त्र प्रहरी बलका पार्कीले ४२ दशमलव १९५ किलोमीटरको दुरी २ घण्टा १८ मिनेट ५९ सेकेन्डमा पार गरेर प्रथम स्थान हासिल गरी छैठौं नेपालगञ्ज म्याराथनको च्याम्पियन बनेका छन । उनी १३औं सागका स्वर्ण पदक विजेता पनि हुन । उनले ७५ हजार रुपैयाँको पुरस्कार हात पारे । पार्कीले टोकियो ओलम्पिकमा भाग लिन पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी, २ घण्टा २० मिनेट ४९ सेकेन्डमा सो दुरी पार गरेर त्रिभुवन आर्मी क्लबका कृष्णबहादुर बस्नेत द्वितीय बने उनले ३० हजार रुपैयाँको पुरस्कार हात पारे । आर्मी क्लब कै खगेन्द्र भाटले २ घण्टा २७ मिनेट २८ सेकेन्डमा सो दुरी पार गरी तृतीय भएका छन । उनले २० हजार रुपैयाँको पुरस्कार प्राप्त गरे । गत वर्षका बिजेता नवराज साउद भने २ घण्टा ३१ मिनेट २१ सेकेन्डमा पार गर्दै चौथो हुदै १० हजारमा चित्त बुझाउनु पर्यो ।
हाफ म्याराथन तर्फ सशस्त्र प्रहरी कै पुष्पा भण्डारी च्याम्पियन बनेकी छन । उनले २१ किलोमिटरको दुरी १ घन्टा २६ मिनेट ५४ सेकेन्डमा पार गरी च्याम्पियन बनेकी हुन । उनी १३ औं सागमा सिल्भर मेडल विजेता पनि हुन । उनले ३० हजार राशीको पुरस्कार हात पारिन ।
त्यसैगरी हुम्लाकी मन्जु रावतले १ घन्टा ३० मिनेट ७ सेकेन्डमा सो दुरी पार गरी द्वितीय र दाङकी शर्मिला घर्तीले १ घन्टा ३८ मिनेट १४ सेकेन्डमा सो दुरी पार गरी तृतीय भएका छ्न । उनीहरुले क्रमशः १५ हजार र १० हजार रुपैयाँको पुरस्कार प्राप्त गरे ।
विजेता खेलाडिलाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, नेपालगञ्ज उपमहानगरका प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणालगायतले पुरस्कार बितरण गर्नुभएको थियो । कोभिड–१९ का कारण दुईवटा ईभेन्टमात्र खेलाईएको आयोजक टिएस ठकुरीले जानकारी दिए ।
उत्तर प्रदेशमा विषाक्त रक्सी पिउँदा ६ को मृत्यु
६ मंसिर २०७७, शनिबार १४:३९
काठमाण्डौ : भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा विषाक्त रक्सी पिउँदा ६ जनाको ज्यान गएको छ भने १५ जना गम्भीर बिरामी भएका छन् । प्रयागराज जिल्लामा भएको घटनामा बिरामी भएकाहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ । प्रहरीले विषाक्त रक्सी बिक्रेतासहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको […]
२८ श्रावण २०७४, शनिबार १९:३७
२१ आश्विन २०७५, आईतवार १८:१३
आईएनएफद्वारा राप्तीसोनारीमा ‘परियोजनाको वार्षिक समिक्षा’ सम्पन्न
२१ माघ २०७६, मंगलवार १९:०६
दिनप्रतिदिन क्यान्सर रोगीको संख्या बढ्नु दुःखद् कुरा : प्रा.डा. पौडेल
६ पुष २०७७, सोमबार १०:२३
लागू औषधबिरुद्धको महाअभियान नरैनापुरमा
१ असार २०७६, आईतवार ११:३७
धम्बोझी क्लव भयो जिल्ला लिग च्याम्पियन
२ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:११
कोरोनाका नौ विरामी थपिए, संक्रमितको संख्या २६७ पुग्यो
बिभिन्न संघसंस्थाहरुद्वारा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध
स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न मागगर्दै काँग्रेस बाँकेले बुझायो ज्ञापन
वडा नं १३ का जनप्रतिनिधि डाक्टरसहित घरमै परामर्श
नेपालगञ्ज–१८ का जनप्रतिनिधि चिकित्सकसहितको सेवा लिएर संक्रमितको घरघरमा